हराउँछन् तर किन भेटिँदैनन् बालबालिका ? कति हराउँछन् बालबालिका ? » RealPati.com
काठमाडौँ । विभिन्न क्षेत्रबाट हराएका बालबालिका भेटिनेक्रम धेरै कम देखिएको छ । उनीहरुलाई घरेलु काममा प्रयोग गर्ने गरेकाले भेटिनेक्रम न्यून देखिएको हो । कतिपय अवस्थामा भेटिएका बालबालिकाको विवरण अभिभावकले पनि दिँदैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा हराएका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै फेला परे । चौसट्ठी प्रतिशतको अवस्था अज्ञात नै छ । गएको वर्ष हराएकामध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका अझै बेखबर छन् । पछिल्लो तीन महीनामा हराएकामध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिकाको अवस्था अज्ञात रहेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर राजभण्डारी बताउनुहुन्छ । “फेला परेर पनि अभिभावकले खबर नगर्ने अवस्था छ, राजभण्डारीले भन्नुभयो, तर धेरैजसो भेटिएका हुन्नन् ।”
आव २०७४/७५ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दुई हजार ३३० बालबालिका हराए जसमा एक हजार ४०७ बालिका र ९२३ बालक छन् । तीमध्ये एक हजार १७ जना फेला परे । उक्त तथ्याङ्कले बालिका बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । एक वर्षमा प्रदेश नं १ बाट २४५, २ बाट २८७, ३ बाट ७०२ (उपत्यकामा २८३), ४ बाट २७५, ५ बाट ३४१, ६ बाट २१० र ७ बाट २७० बालबालिका हराएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४४२ जना बालबालिका बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका थिए । सबैभन्दा बढी उपत्यकामा मात्रै ३०८ बालबालिका बेवारिसे फेला परे ।
केन्द्रले दशैँको अवधिमा १२ जना बालबालिका बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेकोमा दुई बालिका र १० बालक थिए । त्यसमध्ये दुईलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको थियो । अन्य १० को भने परिवार पत्ता लाग्न नसकेकाले संरक्षण गृहमा राखिएको छ । रासस